Vegetable Protein Factory - China Vegetable Mapuroteni Vagadziri, Vatengesi
Pea protein powder ndeimwe mhando yeprotein yakatorwa mupea nehunyanzvi hwemberi. Pea mapuroteni ane ese akakosha amino acids emuviri wemunhu uye ndeemutengo wakazara mapuroteni. Mapuroteni ndiwo hwaro hwehupenyu, ndiwo muviri wezvinhu zvikuru zvitatu. Uye zvakare, pea protein poda isiri-GMO chikafu, hapana soy allergener, uye chengetedzo yepamusoro. Chiyero chekumwa chepea protein protein inodarika 95%, inogadzirisa dambudziko rekuti muviri unonetsa kutora mapuroteni kubva muchikafu uye kunoderedza mutoro mudumbu. Ichi chigadzirwa chakareruka grey hupfu, isina kusungunuka nemvura, uye ndiyo inonyanya kuvimbisa mapuroteni emamwe magengengen mumusika.
Yakagadzirwa Soy Protein
Yedu yakashongedzwa soy protein inogadzirwa ne extrusion michina inotengwa kubva kuUS ine epamba yemhando yepamusoro isiri-transgenic soya uye soy protein sezvinhu zvikuru mbishi zvigadzirwa. Chigadzirwa chinoratidzwa neyakagadzirwa nyama mbichana. Iyo inotora tambo yakasviba uye inotora kuomarara kwakanaka, kusimba uye nyama chewiness mushure mekudzoreredza. Inogona kugadziriswa kuita filaments kana zvidimbu zvine beater kana chopper mushure mekudonhedza mvura. Yakagadzirwa soy protein inogona zvakare kugadziridzwa kuita zvidimbu, mitsetse kana machubhu, ayo anoratidza mafirita ekuumbwa uye chewiness yenyama.
Yakagadzirwa Soybean Protein
Our textured soy protein inogadzirwa ne extrusion michina inotengwa kubva kuUS ine epamhando yepamusoro isina-transgenic soya uye soy protein sezvinhu zvikuru mbishi zvigadzirwa. Chigadzirwa chinoratidzwa neyakagadzirwa nyama mbichana. Init inotora tambo yakasvibira uye inotora kugadzikana kwakanaka, kuomarara uye nyama inotsva mushure mekudzokazve. Inogona kugadziriswa kuita filaments kana zvidimbu zvine beater kana chopper mushure mekudonhedza mvura. Yakagadzirwa soy protein inogona zvakare kugadziridzwa kuita zvidimbu, mitsetse kana machubhu, ayo anoratidza mafirita ekuumbwa uye chewiness yenyama.
Soy Sauce Mapaketi, Vana Mabhisikiti, Kudya Nzungu Dzakarungwa, Mutsva Bean Curd Stick, Ladyfinger Cookie, Hawthorn Strip,